> Resource> Atụmatụ> Wedding ngosi mmịfe Songs Aro - Songs maka Wedding ngosi mmịfe
Wedding ememe bụ ihe kasị kwesịrị ncheta ihe omume nke ma-alụ nwanyị ọhụrụ na-alụ ọhụrụ, karịsịa maka nwunye ọhụrụ. Ọ ga-enwe ụfọdụ agbamakwụkwọ music. Ebe a na-anyị agbamakwụkwọ ngosi mmịfe songs aro maka ememe agbamakwụkwọ na n'ikuku. Niile nke ndị a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe songs bụ bukwanu ma ọ bụrụ na ị na-eme a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe, nke ga-playback kasị nwee obi ụtọ oge nke unu abụọ n'ihu gị ememe agbamakwụkwọ ma ọ bụ na-mere icheta mgbe agbapụ ọtụtụ foto agbamakwụkwọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ enyi gị agbamakwụkwọ, i nwere ike ahọtakwara agbamakwụkwọ video songs si n'okpuru na ikpokọta na-alụ nwanyị ọhụrụ na nwunye photos n'ime a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe na agbamakwụkwọ ngosi mmịfe music ma gbaa ya dị ka onyinye DVD, na mgbe ahụ-ezite ya na ndị enyi gị. Ha nwere ike ịbụ otú nnukwu na ị na-enye ha otú oké ọnụ ahịa na-enweghị atụ onyinye.
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe Bụ ihe dị mfe iji agbamakwụkwọ ngosi mmịfe software nke na-enyere ị na-eme a zuru okè agbamakwụkwọ DVD. Ị nwere ike ibudata a free version nke agbamakwụkwọ ngosi mmịfe software ebe a na-amalite na-eme gị agbamakwụkwọ ngosi mmịfe ya zuru okè agbamakwụkwọ ngosi mmịfe songs.
N'okpuru bụ ụfọdụ ihe atụ nke ezi agbamakwụkwọ ngosi mmịfe music aka gị agbamakwụkwọ ngosi mmịfe n'ụzọ zuru okè:
Wedding ngosi mmịfe songs ndepụta
Na-alụ ọhụrụ na-eto eto:
1. Brown-eyed Girl site Van Morrison
Sir George Ivan Morrison, Jr., OBE bụ a Northern Irish-agụ egwú, songwriter na-akụ egwú.
2. Ị bụ otú ahụ mara mma site Joe Cocker
Pop,-acha anụnụ anụnụ-eyed mkpụrụ obi
John Robert "Joe" Cocker, OBE bụ ihe English-agụ egwú na-akụ egwú. Ọ na-mara maka ya gritty olu, spasmodic ahu ije na arụmọrụ, na definitive nsụgharị nke na-ewu ewu songs.
3. Butterfly nsutu site Bob Carlisle
Robert Mason "Bob" Carlisle bụ ihe American Contemporary Christian-agụ egwú na songwriter. Ọ rụrụ na ọtụtụ ìgwè, ọtụtụ Ichi jikọrọ aka na Billy Thermal, tupu launching a solo ọrụ ebe ọ natara a Grammy Award na anọ Nduru Awards.
4. Miss Independent site Kelly Clarkson
Pop nkume, R & B
Kelly Chinyere Clarkson bụ ihe American-agụ egwú na songwriter. O bilie ka ama ke 2002 ke emeri mbụ oge nke American arụsị, na ebe ọ bụ na e guzobere dị ka "The Original American arụsị."
5. My Girl site The Ọnwụnwa
6. nwanyị mara mma site Roy Orbison
Roy Kelton Orbison, a makwaara ya aha otutu The Big O, bụ onye America na-agụ egwú-songwriter, kasị mara maka ya edenyere ugogbe anya maka anwụ, pụrụ iche, dị ike na olu, mgbagwoju ikwọ, na ọchịchịrị mmetụta uche ballads.
7. Ọ bụ ihe a Lady site Tom Jones
Sir Thomas John Woodward, OBE, mara site na ya ogbo aha Tom Jones, bụ a Welsh na-agụ egwú. Ebe ọ bụ na ufọt ufọt 1960, Jones ka ẹkwọ ọtụtụ ekwekọghị nke na-ewu ewu music - Pop, nkume, R & B, show-awụ ọsọ n'ugwu, mba, na-agba egwú, mkpụrụ obi na ozioma - na-ere karịrị 100 nde ndia.
-Alụ nwanyị ọhụrụ na-eto eto:
8. m na-aga Back site Kenny Chesney
Kenneth Arnold "Kenny" Chesney bụ ihe American mba music-agụ egwú na songwriter. O dere iri na isii albums, iri na anọ ndị nke e gbaara ọlaedo ma ọ bụ elu site RIAA.
9. Lets-anụ ya N'ihi The Boy site Denise Williams
R & B, synthpop, na naa-pop, freestyle
Deniece Williams bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter na ndekọ na-emeputa onye ihe ịga nke ọma na 1970 na afo 1980, Otutu.
10. My Guy site Diana Ross na Supremes
rhythmic mkpụrụ obi
Diana Ernestine Earle Ross bụ ihe American na-agụ egwú, omee, ndekọ emeputa ihe na mgbe ụfọdụ songwriter.
11. The Boy m agbarapụ alụ site The kristal
Jazz, pop, nkume
The kristal bụ onye American olu ìgwè dabere na New York, na-atụle otu nke akọwapụta omume nke ndị girl ìgwè oge ke akpa ọkara nke 1960.
12.-eto eto site Kenny Chesney
Ndụ ha ọnụ:
Ndị na-esonụ songs nwekwara kwesịrị ekwesị iji maka agbamakwụkwọ ngosi mmịfe nke ahụ n'ezie foto agbamakwụkwọ.
13. Mma ọnụ site Jack Johnson
Na Na nkume
14. Malite ugbu a site Shania Twain
Country pop, okenye dịkọrọ ndụ
Shania Twain, OC bụ a Canadian-agụ egwú na songwriter. Twain akanyam n'elu nde 85 ndia, na-eme ya otu onye nke ụwa ji mma-ere artists niile oge.
15. Olee otú Sweet Ọ bụ site James Taylor
Mkpụrụ obi; n'oge pop nkume
James Vernon Taylor bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter na guitarist. A ise oge Grammy Onyinye-eto eto, Taylor edeba aha ya n'usuu n'ime Rock na Roll Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha na 2000.
16. ọ ga-Ị site Frank Sinatra (dị iche iche cover nsụgharị dị)
Francis Albert "Frank" Sinatra bụ onye America na-agụ egwú, omee, director, na ihe nkiri na-emeputa.
17. M Ga-site beatles
Beatles bụ English nkume gbalaga, guzobere Liverpool na 1960. na ndị òtù Jọn Lennon, Paul McCartney, George Harrison na Ringo Starr, ha ghọrọ n'ọtụtụ ebe weere dị ka ndị kasị ukwuu na kasị akpa omume nke oké nkume oge.
18. ịhụnanya site Nat King Cole
Jazz, omenala pop
Nathaniel Adams Coles, mara professionally dị ka Nat King Cole, bụ onye America na-agụ egwú bụ ndị mbụ wee a ma ama dị ka a na-eduga Jazz pianist.
19. Lee anya na anyị site Vince Gill
Vincent Grant "Vince" Gill bụ ihe American mba na-agụ egwú-songwriter na multi-instrumentalist.
20. Ịhụnanya anyị ga-Home site Susan Ashton
Susan Ashton bụ ihe American dịkọrọ ndụ Christian Music na mba music artist onye topped Christian chaatị dị iche iche ofụri 1990s.
N'ihi na ụfọdụ ndị ọzọ agbamakwụkwọ ngosi mmịfe songs, ị nwere ike ịga agbamakwụkwọ songs.
Ụfọdụ agbamakwụkwọ ngosi mmịfe Atụmatụ na echiche
• Unu mee agbamakwụkwọ ngosi mmịfe kwa ogologo. Nke a bụ maa a mgbe nrụgide. 6 - 10 nkeji kacha. Otú a ị ga na-uche nke ege gị ntị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ime ka agbamakwụkwọ ngosi mmịfe a isi omume, ma ga-amasị-agba ya na-na ndabere na a laptọọpụ, mgbe ahụ, mee ka ọ dị ka ogologo oge dị ka ị chọrọ
• Họrọ foto ma ọ bụ obere na obere vidiyo na ga-ewetara ụfọdụ mmetụta uche omume na agbamakwụkwọ gị ọbịa. Chee echiche banyere a 2 afọ-alụ nwanyị ọhụrụ na a afụ saa, na-alụ ọhụrụ na-njikere maka ya metric agba egwú, ma ọ bụ a akwụkwọ foto nke a toothless ọnụ ọchị.
• Buru n'uche na ọ bụ ezie na unu wee mara onye ndị mmadụ na foto ndị, ụfọdụ n'ime gị ọbịa nwere ike ọ gaghị. Ya mere categorize agbamakwụkwọ gị ngosi mmịfe abụọ ma ọ bụ ikekwe atọ edemede ma ọ bụ "Mpaghara" - otu nke nwunye tupu ọ zutere-alụ nwanyị ọhụrụ, otu n'ime-alụ nwanyị ọhụrụ tupu ndụ ya na nwunye na-mgbe ahụ onye nke ndụ ha n'ihi na ha zutere. Ọ bụrụ na ị na-eji abụọ edemede, mgbe ahụ, mee ka ọ onye nke di na nwunye ka ha na-eto eto, na nke abụọ na ngalaba nke abụọ ọnụ. Ikewapụ onye ọ bụla na obere ederede mmeghe na dị iche iche agbamakwụkwọ ngosi mmịfe music ma ọ bụ songs.
• Zere iji ukwuu ederede. Ndị mmadụ na-achọghị ka na-agụ ukwuu. Mgbe niile, a foto bụ uru a puku okwu!
• Tinye ụfọdụ ije na agbamakwụkwọ gị ngosi mmịfe. Adịghị adabere nnọọ ikwu n'ụzọ n'etiti foto. Mbugharị n'ime ụfọdụ nke foto na tinye ụfọdụ video footage ma ọ bụrụ na i nwere.
Free download agbamakwụkwọ ngosi mmịfe software na-amalite na-eme a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe na họọrọ nke ọma agbamakwụkwọ ngosi mmịfe music buo agbamakwụkwọ gị!
Agbamakwụkwọ ịsa Òkù sụgharịa maka Agbamakwụkwọ ịsa Party ịkpọ òkù
Olee otú Mepụta a ngosi mmịfe na Photoshop